Hoggaamiyaha Xisbiga Awoodda Shacabka Thabit ayaa soo dhoweeyay ansixinta sharciga doorashada – Beegsonews-Wararka maanta
Home WARARKA MAANTA Hoggaamiyaha Xisbiga Awoodda Shacabka Thabit ayaa soo dhoweeyay ansixinta sharciga doorashada
Hoggaamiyaha Xisbiga Awoodda Shacabka Thabit Cabdi Maxamed ayaa soo dhoweeyay ansixinta sharciga doorashada ee ku dhisan nidaamka Xisbiyada badan.
Hoggaamiye Thabit ayaa sidoo kale shacabka Soomaaliyeed gaar ahaan dhallinyarada kula dardaarmay in ay ka faa’ideystaan jaaniskaan ay u heleen go’aaminta mustaqbalkooda, kana fiirsadaan cidda ay wax u dhiibanayaan.
Hadalka Hoggaamiyaha hoos ka aqriso.
Soomaaliya in maanta ay yeelato sharci doorasho oo ku dhisan nidaamka xisbiyada badan, shacabkuna cod yeesho waa talaabo wanaagsan. Waxaan boggaadinayaa qof walba oo ka soo shaqeeyay doorashooyinkii hore oo sabab u ahaa in maanta halkan la soo gaaro.
Maanta waxaa ina horyaala howl adag oo ay ugu horeyso ka dhabeynta hirgelinta sharcigan iyada oo la dhawrayo xuquuq iyo xorriyad walba ee uu muwaadinka wax dooranayo ama kan la dooranayaba leeyahay.
Waxaa lama huraan ah dareen shacab oo dhab ah oo dowladnimo loo dhan yahay lagu dhisayo. Sidaa darteed waxaan guud ahaan shacabka Soomaaliyeed, gaar ahaan dhallinyarada leeyahay “waa maalintaadii ee garo xaqaaga, gudo waajibkaaga si laguu doorto ama aad u dooratid adeegayaal qaran oo ka turjumaya baahida dhabta ah ee shacabkeena”.
Daraasadu waxay shaaca ka qaaday saameynta rajo wanaaga iyo fikirka oo...